Nansi impahla okufanele uyibone uma ufuna isivumelwano esifanele eGulshan-e-Iqbal Town. Le ndawo enikezwayo ibamba abathengi abaningi ngenxa yezici zayo ezihlukile. Uma ufuna ukuthenga impahla ehloniphekile ukuze uvikele ikusasa lakho, le Flat onikezwa lapha ithembisa lokho nje. Sithembe uma sithi, le ndawo eku-Rs 12,500,000 ingukutshalwa kwemali okungcono kakhulu ongakufisela. Impahla ye-1500 Square Feet kufanele uyihlole. Azikho izindlela zokungathengiswa kwezindlu eGulshan-e-Iqbal - iBlock 13 / D. Woza uzozibonela. Lezi zici ezingezansi zizokuqinisekisa ukuthi kungani le ndawo ikufanele. Igumbi lokudweba elikule ndlu likuvumela ukuthi ujabulise izivakashi zakho endaweni ecocekile nenhle. Igumbi lokudlela elihlukile futhi libanzi linika le ndawo amandla okuba nenani elikhuphukile ngokuzayo. Ochwepheshe bethu bazophendula imibuzo yakho ngokushesha okukhulu.
Xhumana nomkhangisi +92312281xxxx